Cudurka Coronavirus oo si weyn u gil gilay dalal caalamka kamid ah & Kiisas badan oo la helay
LONDON(P-TIMES)- Dowladda Mexico ayaa waxa ay sheegtay in 46,688 kiis oo cudurka Coronavirus ah laga helay dalkeeda, taas oo ka saraynaysa boqortooyada Ingiriiska si ay u gasho kaalinta saddexaad ee ugu saraysa aduunka oo dhan ee COVID-19.
Dowladda Vietnam ayaa iyaduna diiwaan galisay tiradii ​​labaad ee cudurka Coronavirus, waxaana wadanka ka socda qorshe lagula dagaalamayo cudurka halka kiisaskii ugu badnaa laga helay magaalada Danang ee dalka Vietnam.
Spain ayaa dhankeeda iyana sheegtay maalin labaad 1000 kiis Coronavirus ah, waana tii ugu saraysay ee laga helayo dalka Spain tan iyo markii xukuumadda dalkaasi xayiraada ay ka qaaday shacabka bishii June.
Dowladda ay Qaramada Midoobe aqoonsan tahay ee Liibiya ayaa ku dhawaaqday iyaduna inay kusoo rogi doonto xanibaado meelaha ay ka taliso, kadib ay markii kordheen kiisaska cudurka COVID-19.
In ka badan 17.4 milyan oo dad ah oo aduunka ku nool ayaa laga helay cudurka Coronavirus, waxaanaka bogsaaday in ka badan 10.2 milyan oo bukaan ah halka ugu yaraan 677,000 ay dhinteen cudurka sida lagu sheegay xogta jaamacadda Johns Hopkins oo si gaar ah ula socota cudurka Corona.